पोखराको पर्यटन : खरको छाप्रोबाट सुरु, दुई खर्वको लगानी::Nepali News Portal from Nepal
पोखराको पर्यटन : खरको छाप्रोबाट सुरु, दुई खर्वको लगानी
पोखरा,२९ फागुन – मूलघरबाट छुट्टिएका योगेन्द्रबहादुर भट्टराईले फेवातालको माथिल्लो भाग अम्बोटको धन्सारमा बसोबास थाले । आजको लेकसाइड याने हिजोको बैदाम ! डहर नै डहर ( गल्ली) र खरका छाना भएका घरहरु मात्रै थिए । फेवातालको कञ्चन पानीले प्यास मेटाउँथ्यो । कोदोका बालाहरुसँग मान्छेको जीवन जोडिएको हुन्थ्यो । तर, एकाएक बैदामतिर ‘अनौठा’ मान्छेहरु आउन थाले । आफै टेण्ट बोकर आएकाहरु तालको किनारतिर डेरा जमाउँथे । मस्तसँग गाँजा तान्थे अनि गाँजाकै तालमा बरालिन्थे । टेण्ट नभएकाहरु भने गाउँ पस्थे । पराल ओछ्याएर ‘धनसार ( धन्सार )मै सुत्थे । भाषाको समस्या हुँदा इसाराले नै काम चल्थ्यो । केही रैथाने युवाहरु उनीहरुको संगतमा लागिसकेका थिए ।
योगेन्द्रबहादर यी सबै कुराका सबैको साक्षी बने । उनकै घरको तल पर्ने बसुन्धरा पार्क त्यस्ता फिरङ्गीहरुको पहिलो रोजाई थियो । चैत–वैशाखको एक दिन अचानक ठूलो असिना– पानी आयो । असिना–पानीले फिरङ्गीहरुको टेण्ट उडाइदियो । उनीहरु ज्यान जोगाउन दौडदै योगेन्द्रको धन्सारमा आइपुगे । भाषा किन चाहियो र ? उनीहरुले त्यहीँ रात बिताए । घरमा जे पाक्यो, त्यही खाए । मौषम सुध्रिएपछि बाटोलाग्दा उनीहरुले योगेन्द्रको हातमा ‘हरिया डलर’ थमाइदिए । अनि त के थियो ? योगेन्द्रको मनमा बिजुली चम्क्यो । उनले यस्तै फिरङ्गीहरुलाई बास बसाउने पेशा सुरु गरे । लहडमै पोखराको पहिलो होटल ‘लेकसाइड’ जन्माए ।
योगेन्द्र अहिल यो संसारमा छैनन् । न त, उनको दिमागमा बिजुली चम्काउने हिप्पीहरु नै ! आफ्ना आदर्श बिटल्स ब्याण्डका जोन लेनन पछ्याउँदै भारत अनि चिसो ठाउँ र गाँजा खोज्दै नेपाल पसेका हिप्पीले बैदामलाई लेकसाइड मात्र बनाएनन्, पर्यटनको जग पनि बसाले ।
हिजोको कुरा हो यो । अहिले बैदामका रैथानेहरु पनि आफूलाई लेकसाइडबासी भन्न रुचाउँछन् । हिजो खरले छाएका साना घर भएको लेकसाइड अहिले कंक्रिटको जंगल बनेको छ । पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी यहाँ सयौँ होटल, रिसोर्ट र रेस्टुराँ खोलिएका छन् । बैदामसँगै पोखराले पर्यटकीय नगरीको परिचय बनाएको छ ।
र, हिजो योगेन्द्रले सुरु गरेको पर्यटन व्यवसायमा करिब २ खर्ब लगानी भएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
‘अहिले पोखराको पर्यटनमा २ खर्ब जतिको लगानी छ ’ पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले भने,‘ २५ कोठाको एउटा सामान्य होटल निर्माण गर्न अहिले करिव १५ करोड रुपैयाँ लाग्छ, झन जग्गा पनि छोइनसक्नु छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि पोखरा र आसपासमा यस्ता ४० भन्दा बढी होटल निर्माणाधिन छन् ।
पोखरामात्र हैन, आसपासका सराङकोट, धम्पुस, बेगनासताल, रुपाताल लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि होटल निर्माण तीव्र भएको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन बढी हुन थालेपछि होटल खोल्ने र पर्यटनमा लगानी थपिने क्रम बढेको उनको भनाई छ ।
यता, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एसोसियसन ( रेवान ) पोखराका अध्यक्ष गोपी भट्टराईका अनुसार यहाँका रेष्टुरेण्टहरुमा भएको लगानी पनि कम छैन । नया बन्दै छन्, पुरानाले पनि सेवा बिस्तार गरेका छन्’, उनले भने,‘लगानीको हिसाब गर्दा अर्वौ हुन्छ ।’
पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका पूर्व अध्यक्ष भरतराज पराजुलीका अनुसार पोखरामा अहिले ५ सय हाराहारीमा पर्यटकीय होटल छन् । यी होटलमा करिव १७ हजार विस्तारा रहेका छन् पोखरामा वार्षिक ४ लाख विदेशी र त्यति नै संँख्यामा नेपाली पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेको अनुमानित तथ्यांक छ । वार्षिक झण्डै दुई दर्जन नयाँ होटल पोखरामा थपिने गरेको पनि उनले अनुमान लगाए । अहिले बैदाम क्षेत्रमा मात्र हैन, पोखराको मूख्य भाग महेन्द्रपुलतिर पनि स्तरीय होटल र रेष्टुरेण्ट बनाउने लहर चलेको छ । पत्रकारिताबाट रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा होमिएका युवा पत्रकार अर्जुन गिरिका अनुसार पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्नु तथा यहाँ आउने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएकोले लगानी बढेको हो ।
पोखराको पर्यटनमा लगानी बढ्दै गए पनि यहाँ आउने पर्यटकको बसाई भने छोट्टिदै गएको छ । पर्यटकहरुलाई अड्याउने पर्यटकीय गन्तव्य तथा सिटी टुर गाइडको अभावमा यो अवस्था आएको हो ।
केही वर्ष अघिसम्म पोखरामा पर्यटकको औषत बसाई साढे २ दिन रहेको थियो । अहिले खुम्चिएर साढे एक दिनमा झरेको छ । बसाईसँगै उनीहरुले गर्ने खर्च पनि घटेको व्यवसायीहरुको अनुभव छ ।‘पहिला उनीहरु दैनिक ४० डलरभन्दा माथि खर्च गर्थे, अहिले भने त्यो घटेर उस्तै परे २० डलर पनि हुँदैन’, नेपाल पर्यटन वोर्डका पूर्व सदस्य बासु त्रिपाठीले भने,‘ पर्यटकीय गतिविधीहरु कम हुनु तथा स्तरीय पर्यटक नआउँदा यस्तो भएको हो ।’ उनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई पनि यसको कारक माने ।
नेपाल टे«ेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान ) पश्चिमाञ्चलका पूर्व अध्यक्ष दीपक अधिकारीका अनुसार बढ्दो सहरीकरणका कारण पोखरा बसाइप्रति पर्यटकहरुले खासै चासो देखाउन छाडेका छन् । ‘राजधानीबाट गाडीमा चढेर अन्नपूर्ण पदयात्रा सुरु हुने कास्कीको नयाँपुल जाने र फर्कदा मुस्किलले एक दिन नुहाउन मात्र बस्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘क्रंक्रिटको जंगलमा बस्न रुचाउने पर्यटक कमै हुन्छन् ।’
पोखराको सहरी क्षेत्रमा रहेका फेवातालमा डुंगा सयर, सराङकोटबाट दृष्यावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय एवं पश्चिमाञ्चल संग्रहालयको अवलोकन, पाताले छाँगो,महेन्द्रगुफा र गुप्तेश्वर गुफा, अनदुमा रहेको शान्ति स्तूपा ,माटेपानीमा रहेको मनाङे गुब्बा,बिन्ध्यवासिनी मन्दिरको दर्शनलाई मात्र पर्यटन ब्यवसायीहरुले प्राथमिक गन्तब्यमा राखेका छन् । आन्तरिक पर्यटकहरु सहरी गन्तब्यमा रमाउँछन् भने वाह्य पर्यटक ‘रुस्याक’ बोकेर पदयात्रामा लम्कने गर्छन् ।
पर्यटन ब्यवसायीका अनुसार पोखरा घुम्न चाहने पर्यटकहरुलाई ट्राभल एजेन्सी तथा होटलहरुले नै आफूखुसी ‘सहरी भ्रमण’गराउने गरेका छन् । ‘कुन पर्यटकसँग कति पैसा झार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले पनि पर्यटन बिग्रिएको हो’एक पर्यटन ब्यवसायीले भने,‘एक पटक आएकालाई सकेसम्म चुस्नुपर्छ भन्दा पनि समस्या आयो ।’ पर्यटकको बसाईसँगै उनीहरुले कम खर्च गर्न थालेपछि भने यतिबेला गुणस्तरीय पर्यटकको खोजी थालिएको नेपाल पर्यटन वोर्डका पूर्व सदस्य त्रिपाठीले बताए । ‘हामीले कम्तिमा पनि भुटानको सिको गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘पाउरोटी खाएर दिन बिताउने पर्यटकले यहाँको पर्यटन उद्योग धान्न गाह्रो छ ।’